Siomay Machine, otomatiki Inogadzira Mashini - Fuxin
Tiri vakazvipira asika zvokudya muchini zvebhizimisi pamwe nembiri muchiso. Tave kuedza kuvavarira uye yatichawana kuvandudza michina unhu hwedu kuti kuhwina yedu mutengi zvinogutsa uye kuvimbana. Tiri kutarisira kuti pamwe vatengi vedu neshamwari kumba uye kunze. Tinodavira zvakasimba kuti kusarudza kwatiri kusarudza unhu.
FX-800D otomatiki kamwe chete mutsara siomay / siomai / shu ...
Otomatiki Triple Line Siomay / Siomai / Shumai Maki ...
FX-910B otomatiki Steamed Bun Production Line
Ningbo Jiangbei Fuxin Chikafu Machina Co, Ltd.
Isu tiri nyanzvi yekugadzira inobatanidza R & D, kugadzira, kutengesa uye mushure-yekutengesa basa.
Kambani yedu ine akawanda akakurisa-ekugadzirisa michina.
Kubva pakagadzwa kambani, zvigadzirwa zvave zvichitengeswa pese pese uye zvinotumirwa kunze kwenyika, uye zvakatenderwa uye zvichirumbidzwa nevatengi. Isu tinogara tichitenda kuti "Hunhu ndiyo hwaro hwebhizinesi, uye kutendeseka ndiko kusimba rekuvandudza mabhizinesi". Kana iwe uchida, gamuchira nemwoyo wose kubvunza kwako.
Ningbo Jiangbei Fuxin Chikafu Machina Co, Ltd
stuffed Steamed Bun Machine , Steamed stuffed Bun Kuita Machine , Automatic Steamed stuffed Bun Machine , Pan-Fried Steamed stuffed Bun Machine , Steamed stuffed Bun Machine , Household Steamed stuffed Bun Machine , Products All